पौडेलले देउवालाई भने– तपाईं सिंगो कांग्रेसको नेता बन्ने कि?
सभापति देउवाप्रति आक्रामक शैलीमा देखिएका पौडेलले भने, ‘अब कांग्रेसको छवि सुधार्दै लोकतान्त्रिक आचरण र पद्धतिमा पार्टीलाई हिँडाउने कि नहिँडाउने ? पार्टीभित्र गतिशीलता कसरी पैदा गर्ने ? के गरी कार्यकर्तामा उत्साह र जाँगर पैदा गराउने ? के गरी जनतामा आशा र भरोसा जगाउने ? पौडेलको भनाइमा देउवाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २१, २०७४ ०४:५९:५४